बिधुवा भत्ता सम्बन्धी सरकारले गर्यो यस्तो अनैाठो निर्णय ! एक पल्ट अवश्य पढौ । – AB Sansar
December 19, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on बिधुवा भत्ता सम्बन्धी सरकारले गर्यो यस्तो अनैाठो निर्णय ! एक पल्ट अवश्य पढौ ।
देशमा कोरोना फेरि भयावह बनेको भन्दै भोलि बिहीवार देखि १ महिना पुरै लकडाउन गर्ने सरकारको निर्णय । पूरा विवरण सहित । बेलायतले दोस्रो पटक बन्दीबन्दीको घोषणा गरेको छ ।बेलायतले स्वास्थ्य तथा नैतिक संकट रोक्न भन्दै दोस्रो राष्ट्रव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको छ । पछिल्लो निर्णय जारी गर्दै प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले क्रिसमस ‘निकै फरक’ हुन सक्ने बताएका छन् । महामारी नियन्त्रणका लागि उठाइएको कदमका कारण उक्त पर्वका अवसरमा परिवारका सदस्यहरूबीच भेट हुन सक्ने वातावरण निर्माण हुने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री जोन्सनले रेष्टुराँ, व्यायामशाला र अति आवश्यक सेवामा नपर्ने पसल सबै चार हप्ताका लागि बन्द गरिने बताएका छन् । तर यसअघिको लकडाउनमा बन्द गरिएका विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई यस पटक खुला रहन सक्नेगरी निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
प्रधानमन्त्री ओलीले मनाए आफ्नो ७० औं जन्मोत्सव